I want to create Own Website to free prize — MYSTERY ZILLION
I want to create Own Website to free prize
Please Teach me bros..I want to create own Website and easy to create ..that website must be free prize to server charge ...help me..how to do ?
these are example easy to create own web
စတာတွေမှာ blog တစ်ခုကို လွယ်လွယ် ဖန်တီးလို့ရပါတယ်။
တကယ်လို့ HTML နဲ့ website ဖန်တီးချင်ရင်တော့ free hosting တွေမှာ ဖန်တီးလို့ရပါတယ်။ ဥပမာ။ http://www.000webhost.com/
သမာရိုးကျ HTML ကိုတော့ dropbox က public folder ထဲမှာ ထည့်ပြီး share လို့ရပါတယ်။
thank bro..now i already create at [ http://www.000webhost.com/ ] but i cannot understand web design. So i want to learn html web design ..Pls teach me all bros.
You should use www.webs.com website. It's sub domains are http://example.webs.com it doesn't look bad compared to other like http://example.squarespace.com This website provide very easy yet powerful tools to makeawebsite. You don't need html to createawebsite from there. You just need to know how to drag and drop, then everything is ok.
Blogspot မှာကြတော့ ပြုလုပ်မယ့်သူအနေနဲ့ ကိုယ်ပိုင် ဒိုမိန်းနဲ့ ဝယ်ပြီးချိတ်ဆက်လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Blog ပုံစံပဲဖြစ်နေမှာပါ။ Template အများစုလည်းရှိပါတယ်။
Wordpress ကြတော့လည်း ဒိုမိန်း ကို်ယ်ပိုင်ဝယ်ပြီးချိတ်မယ်ဆိုရင် ပို်က်ဆံသက်သက်ပေးရပါတယ်။ သူကလည်း Blog ပုံစံပါပဲ။ Template ကို Google.com မှာ Wordpress Template လို့ရှာပြီး Download ပြုလုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် yourname.wordpress.com နဲ့ပဲ ရပါတယ်။
Webs မှာကြတော့ ကိုယ်က သူငယ်ချင်းကို Invite လုပ်လို့ သူငယ်ချင်းက အကောင့်လာဖွင့်ရင်6လ အခမဲ့ ရပါတယ်။ ကျွန်တော် စမ်းကြည့်ပြီးပါပြီး သူ့မှာလည်း Template တွေတော်တော်များများပါပြီး စသုံးမယ် Begineer တွေအတွက် အဆင်ပြေပါတယ်။
www.freehostia.com မှာကြတော့ Hosting အကောင့်အခမဲ့ယူနိုင်ပြီး ကိုယ်ပိုင် Domain နဲ့ ချိတ်ဆက်ဖို့လိုပါတယ်။ Template တွေကိုတော့ Google.com မှာ Html Template လို့ရှာတာ ဒါမှမဟုတ် http://www.quackit.com/html/templates/ မှာ ဝင်ပြီး Download ပြုလုပ်နိုင်မှာပါ။ ပြီးတော့ HTML အကြောင်းနည်းနည်းသိအောင် http://w3schools.com/ မှာ ဝင်ရောက်လေ့လာသင့်ပါတယ်။
Free Domain တွေကိုလျှောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့
www.dot.tk အစရှိသဖြင့် စတာတွေမှာ အခမဲ့လျှောက်ထားလို့ရပါတယ်။